Gary Neville oo ammaanay laba ka mid ah xiddigaha kooxda Liverpool – Gool FM
Gary Neville oo ammaanay laba ka mid ah xiddigaha kooxda Liverpool
Dajiye December 21, 2021
(London) 21 Dis 2021. Halyeeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa ammaanay daafacyada Liverpool Andrew Robertson iyo Trent Alexander-Arnold, isagoo u arkaa inay yihiin kuwa ugu fiican Premier League.
Halyeyga Manchester United ayaa ra’yigiisa ka dhiibtay in labada ciyaaryahan ee Andrew Robertson iyo Trent Alexander-Arnold ay u qalmaan in lala meel dhigo hayeeyada kubadda cagt Brazil ee ee Roberto Carlos iyo Cafu.
Wargeyska Daily Mail ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville, wuxuuna yiri:
“Andrew Robertson iyo Trent Alexander-Arnold waa kuwa ugu fiican taariikhda Premier League.”
“Uma malaynayo in aan arkay laba daafac oo garbaha ka dheela oo ka ciyaaraya horyaalka Premier League sida labadan ciyaaryahan oo kale.”
“Caawinta ay labadooda sameeyaan waa wax aan la rumaysan karin.”
Daafac ka tirsan Chelsea oo ay saxiixiisa doonaysay Barcelona oo raba inuu la sii joogo Kooxdiisa… (Waa kee?)
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Sevilla iyo Barcelona ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey